DHAGEYSO:Ruto: Kenyaanka ayaa leh go’aanka ugu dambeeya ee hoggaanka dalka | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Ruto: Kenyaanka ayaa leh go’aanka ugu dambeeya ee hoggaanka dalka
DHAGEYSO:Ruto: Kenyaanka ayaa leh go’aanka ugu dambeeya ee hoggaanka dalka
Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo kulan la qaatay wakiillada deegaanada hoose ee ismaamullada bartamaha dalka ayaa sheegay in go’aanka ugu dambeeyay ee la xiriira cidda wadanka madaxweyne ka noqonayso uu yahay mid ay qaadanayaan keliya codbixiyayaasha.
Waxaa uu xusay in kastoo la sheego in ay jirto adeegsiga awood dowladeed balse taasi aynan waxbo ka beddeli karin rabitaanka shacabka.
Wakiillada ayuu ka codsaday in ay sare u qaadaan ololihiisa doorasho ee sanadka 2022-ka.
Dhanka kale xilli uu maanta ku sugnaa xaafadda Umoja ee magaalada Nairobi ayuu gaashaanka u daruuray eedeyn uga timid madaxa xisbiga ODM Raila Odinga oo ku aaddanayd lacagaha uu ku wareejiyo kaniisadaha dalka.
Waxaa uu sidoo ka jawaabay hadal shalay ka soo yeeray Mr. Odinga oo ahaa in hadii uu madaxweyne noqdo uu xabsiga dhigi doono mas’uuliyiinta musuqmaasuqa ku lugta leh.
Raila ayaa ballanqaadkiisa ah inuu xirayo saraakiisha dowladda ka tirsan ee lagu eedeyo falalka wax isdaba marinta sidatan u dhigay
Previous articleMadaxweynaha dalka oo ka tacsiyeeyay geerida maalqabeen dhawaan dhintay
Next articleIn ka badan 17 qof oo ku dhimatay diyaarad ku burburtay Filibiin